Dopo un infarto ho visto il Paradiso e una voce mi ha detto "non sei finito" | Ilblogdellapreghiera
Mgbe nkụchi obi gasịrị, ahụrụ m Eluigwe na otu olu kwuru sị "emechabeghị"
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 4, 2020 Maggio 4, 2020
na Ọktọba 24, 2019, ọ bidoro otu ụbọchị. Mụ na nwunye m nọ ọdụ na-ekiri akụkọ ahụ na TV. Ọ bụ 8:30 na m na-a myụ kọfị m na laptọọpụ m n'ihu m.
Na mberede, amalitere m nka obere oge, iku ume m wee kwụsị, nwunye m wee chọpụta na ọ ga-eme ihe ọsọ ọsọ. Adara m n'obi jidere obi m ma obu ọnwụ obi mberede. Nwunye m weturu obi ozugbo m matara na m naghị ehi ura, ọ malitere ịchịkwa CPR. Ọ kpọrọ 911 na ndị ọrịa obodo nke Tonawanda nọ n'ụlọ na nkeji anọ.
N'izu abụọ na-esote nwunye m, Amy gwara m, ebe ọ bụ na echetaghị m otu ihe. Ambulance butere m na ICU nke Buffalo General Medical Center. A na-etinye paịpụ na ọkpọ ọ bụla n'ime m ma kechie m na ice. Ndị dọkịta enweghị olile anya dị ukwuu n'ihi na n'ọnọdụ a enwere naanị nlanarị n'etiti ihe dị ka 5% na 10%. Abalị atọ ka nke ahụ gasịrị, obi m kwụsịrị ọzọ. Edebere CPR ma agbakem.
N’oge a, amatara m otu ọkụ na-enwu enwu ma nke nwere ọtụtụ ihe na-enwu nso. Anọ m n'ahụhụ. Anụrụ m okwu atọ m na-agaghị echefu ma ọlị nke na-eme m ụjọ mgbe ọ bụla m na-echeta ha, na-agba ákwá: "Emeghị gị."
N’oge a, mụ na onye ọzọ m toro n’okporo ụzọ dị na Tonawanda onye nwụrụ n’ihe ọghọm ụgbọelu afọ ole na ole gara aga.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu atọ, etinyere m n'ọnụ ụlọ nke nwere ọkara na ngalaba mmegharị ahụ. A maara m ebe m na ndị ọbịa nọ na nke mbụ m kemgbe ụlọ ọgwụ. Ndozigharị m meghachiri ngwa ngwa nke na ndị dọkịta na-agwọ ọrịa juru ya anya. Onye ụkọchukwu na dọkịta m kwuru na abụ m ọrụ ebube.
Ekelere m Chineke maka ịlaghachi n’ụlọ maka inye ekele, ekeresimesi na afọ ọhụrụ nke nwere ike ịbụ na emebeghị.
Agbanyeghị na agbakeela m 100%, aga m ebi ụfọdụ mgbanwe na ndụ m.
N’oge m nọrọ n’ụlọ ọgwụ, enwere m ihe defibrillator / pacemaker etinye n’ime obi m, aga m eso ọtụtụ ọgwụ iji gbochie ya ime ọzọ.
Ahụmahụ a mere ka mmekọrịta mụ na Chineke sikwuo ike ma mee ka egwu ọnwụ ghara ịdị. Enwere m ekele karị karịa oge m hapụrụ na ịmara na ọ nwere ike ịgbanwe n'otu ntabi anya.
Enwere m nnukwu ịhụnanya karịa maka ezinụlọ m, nwunye m, nwa m nwoke na nwa m nwanyị, ụmụ ụmụ m ise na ụmụ ụmụ m abụọ. Enwere m nnukwu nkwanye ùgwù maka nwunye m, ọ bụghị naanị maka ịchebe ndụ m, mana maka ihe chere ya ihu n'oge nhụjuanya m. Ọ kwesịrị ilekọta ihe niile site na akwụkwọ ego na ihe gbasara ezinụlọ ruo na-eme mkpebi gbasara ahụike m, yana kwa ịnya ụlọ ọgwụ kwa ụbọchị.
Otu n’ime ajụjụ m nwetaworo na ahụmịhe a na-agụta bụ ihe m kwesiri ime na oge m. Olu nke na-agwa m emeghị m oge niile na-eme ka m chee echiche ihe ọ pụtara.
Ọ na - eme m ka m chee na enwere m ihe m ga - eme iji gosi na ịlaghachi n’ala ndị dị ndụ. Kemgbe m dị ihe dị ka afọ iri abụọ na asaa, atụghị m anya ịchọpụta ụwa ọhụrụ ma ọ bụ iweta udo n'ụwa n'ihi na echeghị m na enwere m oge zuru ezu. Ma ị maghị.
← Na post gara aga Gara aga post:Etu ị gha esi merie ụjọ site na ịtụkwasị Chineke obi
Ọzọ Post → Post ozo:Nkwupụta ise maka idozi ọnọdụ na enweghị obi abụọ